Izay Lazain’ireo Bilaogera Ao El Salvador – Momba Ny Hery Mitam-piadiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Desambra 2017 12:40 GMT
(Fanamarihana: Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Oktobra 2006)
Nanoratra lahatsoratra manakiana ny fomba fandaniam-bolan'ny miaramila ao El Salvador ireo bilaogera Salvadoriana avy amin'ny havia, indrindra fa amin'ny fotoana hisian'ny olana sosialy maika ao amin'ny firenena toy ny heloka bevava, ny fanadiovana sy fanatsaràna, ary ny fahantrana. Teti-bola mitentina hatramin'ny 162 tapitrisa dolara no natokana ho an'ny miaramila ao amin'ity firenena kely ao Amerika Afovoany ity, izay manana mponina miisa 6 tapitrisa (loharanom-baovao: CIA World Fact Book).
Jeren'ilay bilaogera Hunnapuh ny haavon'ny fandaniana misy ao amin'ny tafika. Nanao kajy tsotsotra izy mba hanehoana fa ireo olona ambonin'ireo ambany grady indrindra dia mandray betsaka lavitra isam-bolana raha alahatra amin'ireo mpampianatra sy dokotera. Izany elanelana izany indrindra no nanosika an'i Hunnapuh hanao fanentanana tao amin'ny bilaogy mba hanafoanana ny tafika.
Tsy niombona hevitra tamin'izany i El Visitador, izay niantso ny tafika ho politikam-piantohana tena ilaina. Raha tsy misy tafika, hoy izy manamafy, dia ho toa an'i Kiobà sy Meksika izay eo ambany fanapahan'ny Komandà Marco i El Salvador, satria ny hetsiky ny mpihoko ùmitam-piadiana no maka ny fifehezana any amin'ireo firenena ao Amerika Latina.
Misy famotopotorana natao tao amin'ny bilaogin'i Hunnapuh izay nanontaniana ireo mpamaky raha toa zareo ka mankasitraka ny fanafoanana ny tafika. Miombona hevitra amin'ny fanafoanana ny tafika ny 70%-n'ny fanehoankevitra, saingy mety misy ifandraisany amin'ireo mamaky biloagy ao El Salvador io rah aoharina amin'ny fihetsehampo malaza amin'izao fotoana izao.
Mandritr'izany fotoana izany, faritan'ny Bilaogy El Salvador an'i Tim ny ady taimbava ifanaovan'i Honduras sy El Salvador momba ilay nosikely tsy misy mponina ao Conejo, Golfa Fonseca, ary manontany tena raha ho an'ny fifandirana tahaka izany fotsiny no ilàna ny hitazonana ny tafika. Mino i Hunnapuh fa tsy kisendrasendra ny hoe, amin'ny fotoana anombohana miresaka ny fanafoanana ny tafika, miseho ny ady sisintany sy ny fanevatevàna ny fiandrianam-pirenen'i El Salvador.